Iindaba- Malunga neCemented Carbide (II)
Iintonga zeTungsten Carbide
Iintonga zeCarbide eziqinileyo
Iintsimbi zeCarbide ezinomngxuma wokupholisa
Iintonga zeCarbide ezinemingxuma emibini yeHelix
Izixhobo zeTungsten Carbide
I-Solide Carbide End Mills
Iidiski zeTungsten Carbide kunye neeBleyi zokuSarha
Izahlulo zeTungsten Carbide ezenzelwe wena
Malunga neCemented Carbide (II)
1.Iipropati eziphambili kunye nesicelo
I-carbide ene-cemented inoluhlu lweepropati ezigqwesileyo ezifana nobunzima obuphezulu, ukuxhathisa ukunxiba, ukomelela okulungileyo kunye nokuqina, ukumelana nobushushu kunye nokumelana nokushisa, ngakumbi ubunzima bayo obuphezulu kunye nokumelana nokunxiba, okuhlala kungatshintshi nakwiqondo lobushushu le-500 ° C. inobunzima obuphezulu kwi-1000 ℃. I-carbide enesamente isetyenziswa ngokubanzi njengezixhobo ze-carbide enesamente, ezifana nezixhobo zokujika, izixhobo zokusila, iiplani, iidrili, izigawuli ezikruqulayo, njl. intsimbi eqhelekileyo. Isetyenziselwa ukusika izinto ezinzima kumatshini ezifana nentsimbi ekwazi ukumelana nobushushu, intsimbi engatyiwa, intsimbi ephezulu yemanganese, kunye nentsimbi yesixhobo. Isantya sokusika izixhobo ezintsha ze-carbide ngoku ngamakhulu amaxesha e-carbon steel.
2.Esinye isicelo esikhethekileyo
I-carbide ene-cemented ingasetyenziselwa ukwenza izixhobo zokugaya amatye, izixhobo zemigodi, izixhobo zokugaya, izixhobo zokulinganisa, izixhobo ezingagugiyo, izixhobo ezinqabileyo zentsimbi, i-cylinder linings, iibheringi ezichanekileyo, imilomo, njl njl. Uninzi lwezi mveliso zingasentla zinokubonelelwa nguNanchang. Umzi-mveliso weCarbide onesamente.
3.Uphuhliso lwekhabhide enesamente
Kwiminyaka engamashumi amabini edlulileyo, i-carbide efakwe ngesamente iye yaphuma nayo. Ngomnyaka we-1969, iSweden (iifektri ezininzi ze-carbide zesamente) zaphuhlisa ngempumelelo izixhobo ezigqunywe nge-titanium carbide. I-matrix yezixhobo ze-carbide ze-cemented yi-tungsten-titanium-cobalt i-cemented carbide okanye i-tungsten-cobalt cemented carbide. Ubukhulu bomgangatho we-titanium carbide coating zii-microns ezimbalwa kuphela. Kodwa xa kuthelekiswa nezixhobo ze-carbide ze-cemented ze-brand efanayo, ubomi benkonzo bandiswa ngamaxesha e-3, kwaye isantya sokusika sanda ngama-25% ukuya kwi-50%. Isizukulwana sesine sezixhobo ezigqunyiweyo savela kwiminyaka yoo-1970, engasetyenziselwa ukusika izinto ezinzima kumatshini.
4.Umzekelo womenzi we-carbide ene-cemented
I-Nanchang Cemented Carbide Limited Liability Company (i-NCC ngokufutshane) njengenkampani enkulu karhulumente, inomxokelelwane opheleleyo wemizi-mveliso ukusuka kwi-tungsten kwizixhobo eziluhlaza ukuya kwizixhobo zokugaya. Ivelisa ubukhulu becala uthotho lweemveliso ezintathu, iimveliso zomgubo wetungsten, iintonga zekhabhide ezisamente kunye ne-othe engeyiyo eyomgangatho kunye nezixhobo zokusila ezichanekileyo. Ukuzoba kunye nokuveliswa kwesampulu kunye nokusetyenzwa kweemveliso ezahlukeneyo ze-carbide. I-NCC liqashiso lokuqala ukuhlangabezana nemigangatho yomgangatho wamazwe ngamazwe, kwaye iimveliso zayo zombini zithengiswa kakuhle ekhaya naphesheya, kwaye zamkelwa kakuhle ngabathengi abatsha nabandala!
Ixesha lokuposa: Mar-30-2021
Isixhobo seCarbide, ICarbide enesamente, IiMill zokuphela kweCarbide, Milling Cutter, Izixhobo zeCarbide, Carbide Precision Tools,